पढाइ खर्च जुटाउनका लागी आँप बेचि’ रहेकी एक बालिकाको एकाएक चम्कियो भाग्य! (भिडियो सहित) – Ap Nepal
पढाइ खर्च जुटाउनका लागी आँप बेचि’ रहेकी एक बालिकाको एकाएक चम्कियो भाग्य! (भिडियो सहित)
June 1, 2022 123
को’रोनाभाइरस महामारीका कारण विद्यालय बन्द भयो । त्यसपछि ५ कक्षाकी विद्यार्थी तुलसी घरमै बस्न बा’ध्य भइन् । विद्यालयले पढाइ सुरु गरेको तुलसीले जानकारी पाइन् तर उनी कक्षामा उपस्थित हुन स’क्दिनथिन् ।
उनको परिवारको आर्थिक अ’वस्था कमजोर छ । उनको परिवारले उनलाई पढाइरहेका त थिए तर को’रोनाकालमा स्कुल ब’न्द भए । स्कुल ब’न्द भएपछि अनलाइन कक्षा सुरु भयो तर तुलसीको पढाइ भने ठप्प भयो किनकि उनीसँग स्मा’र्टफोन थिएन ।तुलसीले पैसा जुटाउन आँप बेच्न थालिन् ।
त्यसपछि उनले तुलसीलाई सहयोग गर्न अगाडि आए ।उनले तुलसीका १२ वटा आँप प्रतिआँप १० हजारका दरले १ लाख २० हजारमा कि’निदिए । अब अमेया हेतेले तुलसीको सपनालाई नयाँ उ’डान दिएका छन्, तुलसी कहाँसम्म पुग्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो पैसाबाट लुतसीले १३ हजार रुपैयाँमा स्मा’र्टफोन किनेकी छिन् । बाँकी रकम उनले अ’गाडिको पढाइको लागि राखेकी छिन् । अब भने उनी सडक कि’नारामा आँप बे’चिरहेकी दे’खिन्नन ।
Prevआयो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची
Nextएक पटक सबैले पढ्नै पर्ने सुगाको मन छुने कथा !
यो भाईको कला देखेर शिशिर भण्डारी छक्कै परे । यस्तो गरेर घरमै बसेर महिनाको लाखौं क,माउँछन् (भि, डियो हेर्नुस)
बालेन शाहको अर्को यस्तो निर्णयलाई पाय तारिफै तारिफ..
यी महान छोरी जसले कलेजो दिएर बचाइन् आफ्नी आमाको ज्यान, चार दिनपछि जब होश खुलेपछि…